नेपाल आइडल किन सुरु भएन ? कतारमा यस्तो कार्यक्रम हुदै छ (भिडियो सहित ) – Complete Nepali News Portal
नेपाल आइडल किन सुरु भएन ? कतारमा यस्तो कार्यक्रम हुदै छ (भिडियो सहित )
September 22, 2017	176 Views
विशाल स्टेजमा हुने फाइनलको अन्तिम तयारी चलिरहँदा यहाँको रौनक उत्कर्षमा छ । मिनी नेपाल भनेर चिनिने कतारमा लाखौं नेपालीहरु कामको सिलसिलामा पुगेका छन् ।किन नेपाल आइडल कार्यक्रम ढीलो हुदै छ त ? कतारमा यस्तो कार्यक्रम हुदै छ , तल भिडियोमा हेर्नुहोला ।